UBonny Lee Bakley, Umfazi obulawe nguThandi uRobert Blake
Ibali lomculi weCon ophelela ekudanjeni kwegazi
UBonny Lee Bakley wayengeyintombazana entle. Wayengumculi osebenzisa isondo kunye nokukhohlisa kumadoda e-bilk-abaninzi abanotyebi kunye nabadumileyo kwimali yabo kunye nabantwana babo kwilifa labo. Xa wadutshulwa ekufeni ngoMeyi 2001, umyeni wakhe ngelo xesha, umlingisi uRobert Blake, wagwetyelwa ulwaphulo-mthetho, kodwa kwakukho uluhlu olude lwabanye abantu abaneenjongo.
Iminyaka yeBabley's Childhood
UBonny Lee Bakley wazalwa eMorristown, eNew Jersey, ngoJuni 7, 1956.
Njengentombazana encinci, amaphupha akhe ayefana nabanye ubudala bakhe, ngelinye ilanga baba zizityebi kunye nodumo. Mhlawumbi ikhaya lakhe elihlwempuzekileyo lakunceda ukuqhuba le mibono. Okanye, mhlawumbi umnqweno wokushiya umuzi wakubo kwaye uqale indlela yakhe yokuya kukhula ngakumbi emva kokuvalelwa kakubi ngokwesondo ngoyise. Kungakhathaliseki ukuba yintoni isizathu, ukuqhuba kwakhe ukunyamezela kwaba yimpumputhe.
Kukholelwa ukuba uBabley wayevalelwa njengomntwana ukuba ahlupheke. Wakhula waba ngumntwana osemtsha. Wagqiba ukuzama ukulandelelanisa, kwaye watyikityha nge-ejensi esondeleyo. Nge-arhente, wadibana nomnye u-Evangelos Paulakis, owayenomdla wokuhlala e-US kwaye wayefuna ukutshata ukwenza njalo. U-Bakley wavuma ukutshata naye ngentengo, kodwa kungekudala emva kokuba aba babini babelane "Ndiyenzi" uBabley, ngemali ngokukhuselekileyo, waphelisa umtshato, kwaye uPalakis wathatyathwa ngabasemagunyeni waza waxoshwa.
Emva kwesibini esikolweni esiphakamileyo, uBabley waya eNew York ukuba aqale ukunyuka ukuya kwi-stardom. Waqala ukuzibiza ngokuthi nguLee Bonny. Wakwazi ukufumana imisebenzi emincinci yemimiselo emincinci, kwaye wayesebenza njengento eyongezelelweyo kwiimvumi ezimbalwa . Kodwa injongo yakhe yokuba yinkwenkwezi yayingenakwenzeka. Ngoko, wayebeka ingqalelo kwezinye iindlela zokufezekisa, ukuba kungekhona ukukhawuleza, i-fortune eyayiza nayo.
Ugxininiso lwakhe lushintsha ekubeni yinkwenkwezi ukutshata omnye.
I-Bakley's Sex Scam Business
Kwiminyaka engama-20, uBakley watshata nomzala wakhe, uPaul Gawron, umsetyenzana owayesisitrato esichukumisayo kwaye enyanzelekile ukuziphatha ngendlela enobudlova. Babenabantwana ababini uGawron owayekhathalele ngokuyinhloko xa uBarley esebenzela umsebenzi wakhe omtsha, ishishini lokurhumela i-imeyili elijolise ekuhlaseleni abantu abanesizungu ngaphandle kwemali. Ngaba uBakley akazange akhethe indlela engaphantsi kweyona ndlela, umoya wakhe woosomashishini odibaniswe namandla akhe okuthengisa, ukulungelelanisa, kunye nenzuzo kwimveliso yokhuphiswano elinokukhuphisana.
I-Gawron neBakley babenomtshato ophosakeleyo kwaye onganeliseki. UBabaley, owayesexakekile egaxa imali ebantwini, ngezinye izihlandlo kwigumbi lokulala, wayenelisekile ukuvumela uGawron ahlale ekhaya. Kwakubonakala sengathi uyakuvuyela ukuba angasebenzi. Kodwa ngo-1982, umtshato waphela. Ukukhwabanisa kukaBakley ukuba kungaphakathi kwimijikelezo yangaphakathi yodumo oluxutywe kunye nenyaniso yokuba wayengafumani ncinane. Oku kwashukumisa isigqibo sakhe sokushiya abantwana bakhe ekunakekeleni uGawn kunye nentloko ukuya eMemphis, eTennessee, emnyango womculi womculo, uJerry Lee Lewis.
I-Bakley Stalks uJerry Lee Lewis
Amaqhinga okwenza ubulili beBakley kunye nokusetyenziswa kwakhe kwamakhadi okuthenga ngetyala kunye nokuchongwa kwamgcina umnxeba wakhe, kwaye wakwazi ukuza kwiindawo apho uJerry Lee Lewis wayenza khona.
Ukubhukuda, iBakley yayihlala iphazamisa amaqela kwaye iboniswe kwimidlalo nje ukuba ifike kufuphi noLee. Ekugqibeleni, abo babini badibana no-1982, kwaye ubuhlobo buphuhlisiwe.
UJerry Lee Lewis kunye noBakley bahlala bebahlobo baze uBakley akhulelwe waza watshela wonke umntu ukuba uyise wengane nguJerry Lee Lewis kwaye wayemshiya umfazi ukumtshata. Xa umntwana ezalwa, uBakley wamthiya nguJerry Lee waza wagqiba isitifiketi sokuzalwa, "ubaba akaqinisekanga." Ubuhlobo phakathi kukaLee noBakley buphelile kwaye umntwana uJerry Lee wathunyelwa ukuba aphile nomyeni waseBakley wangaphambili kunye nabanye abantwana bakhe. Kamva kwafumaniswa ukuba uBakley wenza ukusongela ukufa kumfazi ka Lewis.
I-"Anything Goes" yeBakley
Ibhuku ledilesi yaseBakley ezaliswe ngamagama, ezinye iidumi kwaye ezinye zizityebi. Amagama afana noRobert DeNiro, uSayar Ray Leonard , noJimmy Swaggart bafunyenwe phakathi kwoluhlu.
Ibhizinisi lokwabelana ngesondo lakwaBakley laba likhulu, kwaye wathengisa kumaphephancwadi ezesondo ukuba "wayeyintlobano yesini," oko kuthetha ukuba uza kuzama nantoni na kwaye ukhetho lwakhe lwalubuhlungu, ubulili bobulili, kunye nobulili . Waxhaphaza amadoda ngaphandle kwamakhulu amawaka eedola kuye "nantoni na ehambayo" amabango.
UBabley wabanjwa ngenxa yokuzama ukubhala ukuhlolwa okubi kwi-$ 200,000 kwaye wagwetywa ukubika kwipulazi ephambuka ngeveki kwiminyaka emithathu. E-Arkansas, wabanjwa ngenxa yokuphatha iimpawu ezingaphezulu kwezingama-30 kwaye wafakwa kwi-probation. Xa wagqiba isigwebo sakhe eTennessee, kwaye ubuhlobo bakhe noLuvyi buphelile, wagqiba kwexesha lokuba ahambe eMzantsi, waza waya ezweni elidumileyo kunye no-Stardom-Hollywood.
UBakley noRobert Blake Bakha i-Knot
U-Bonny waqhubeka ekhwabanisa ngesondo ngoomaphephancwadi kunye nokuthandana neenkwenkwezi ezimbalwa, omnye engumKristu uBrando. Indlela yena kunye ne "Baretta" inkwenkwezi uRobert Blake badibana ngayo, kuxhomekeke ekubeni ngubani ocelayo. Udadewabo kaBakley bathi badibana kwiqela le-jazz kwaye banamathele ukusuka kwigumbi. Ummeli kaBlake uthe uRobert Blake akazange azi igama lakhe kwaye balala ngesondo kwilori, engazange ahlale ekhaya. Nantoni na inyaniso, into enye yayiqinisekileyo; kwakungengomdlalo owenziwe ezulwini.
Kungekudala emva kokuqala kwento, uBabley watshela uBlake ukuba ukhulelwe. Imithombo ithi iBabley yayithatha iipilisi zokuzala njengendlela yokumbamba inkwenkwezi kwiwebhu. Xa umntwana wazalwa, waqamba igama lakhe ngu-Christian Shannon Brando kwaye wabhala uBrando njengoyise. Ukuvavanywa kobuntwana kamva kwabonisa ukuba ubaba nguBlake.
UBonny Lee noRobert Blake batshata ngoNovemba 2000, kwaye uBonny wathuthela endlwini yindwendwe kwipropati.
Emva kweenyanga ezintandathu kuphela zomtshato, ngoMeyi 2001, uBlake noBakley baya kudla kwi-Restaurant yase-Vitello yaseNtaliyane, apho uBlake wayengumthengi oqhelekileyo. Emva kokutya, abo babini bahamba baya emotweni yabo.
Ngokutsho kukaBlake, waqonda ukuba washiya i-revolver yakhe kwindawo yokutyela waza washiya ukuyibuyisela. Xa ebuyela emotweni, wafumana uBakley ngenxeba lokubhokoxa ekhanda lakhe, efa esihlalweni sokuqala. UBlake wagijimela uncedo, kodwa uBabley washeshe wafa.
Emva komnyaka wophando, uBlake wabanjwa waza wahlawuliswa ngokubulawa kukaBonny Lee Bakley. Ngo-Matshi 15, 2005, ijaji labasetyhini abasixhenxe kunye namadoda amahlanu baxoxela ngeeyure ezingama-36 ngaphambi kokuba babuyisele isigwebo sokuba bangenacala ekubulaleni komfazi kwaye abanetyala kwinani elilodwa lokucela umntu ukuba ambulale.
Nangona ekhutshwe enkundleni yezobugebengu, inkwenkwezi ye "Baretta" yayingekho inhlanhla enkundleni yomntu, apho isigwebo asidingi ukuba simanyanise. Ijaji lomphakathi lagqiba i-10-2 ukuba umdlali onzima oneminyaka engama-40 ubudala wayedla ngokubulala kwaye wamyala ukuba akhokhe abantwana abane uBonny Lee Bakley ama-$ 30 yezigidi.
Icala likaRobert Blake - Iindaba zeMvavanyo kunye nohlaziyo oluMbulalayo eHollywood nguGary C. King
AmaBhunga Athu, Eziqu: UClara Harris noBonny Bakley
Ukubulawa kukaMicaela Costanzo
Iprofayili ka-Idaho Teen Killer uSarah Johnson
Scott Carpenter Biography
I-Admissions School entsha
IKrismesi eFransi - IsiGama sikaNowa, iMasiko kunye nemihlobiso
12 Iingcebiso ezibalulekileyo zokuzikhusela kwi-Cyberstalking
Iiminyaka ezili-110 ze-Championship Skating Champions
I-Midcentury Modern Architecture e-Palm Springs, eCalifornia
Umdlalo wexesha lomculo
Ukuqonda ukuhlaziywa kwi-Sociology
Iingqungquthela eziyinqaba: Liliphi Ibali eliyinyaniso?
Iindawo eziphambili ze-Star Trek: Isizukulwana esilandelayo
IMfazwe yaseMexico naseMelika: Ukuvinjelwa kweVeracruz
Ukwahlukana Phakathi kweeNkantyambo, iziNdlovu, kunye namaKhukhula
I-Librarian yaseBasra: Ibali Eliyinyaniso le-Iraq kubantwana
Ukuqonda i-Premier League
Iqhawe labesifazana lilahla iiRekodi zehlabathi
Funda i-Etymology yeLizwi leGalofu
Indlela Yokunyamekela I-Surfboard Yakho
IiAids - izakhi zeMikhali
Phezulu uDan Fogelberg Iingoma zee-80s
Ezi Tutorials Zobuhle zazihlambalahla